Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho & faah faahin laga helay | SMC
Home WARARKA MAANTA Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho & faah faahin laga helay
Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho & faah faahin laga helay
Qaraxaan oo jugtiisa laga maqlay degmooyinka tirsan gobolkan Banaadir ayaa waxaa uu ka dhacay inta u dhexeysa isgoysyada Sanca iyo Fagax gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano Godka siisi ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo ahaa miinada noocad hulka lagu Aaso ayaa wararka la helay waxaa ay sheegayaan in lala eegtay Gaariga Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir Muuse Geesey Jimcaale, balse uu gaariga qaraxa ka badbaaday.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxa uusan ka dhalan wax khasaaro ah marka laga reebo jugta qaraxa oo laga maqlay meelo badan oo kamid ah degmooyinka Gobolkan Banaadir.
Ciidamo ka tirsan booliska degmada Yaaqshiid ayaa tegay halka uu qaraxa ka dhacay, iyaga oo halkaasi ka sameeyay howlgallo walow howlgalladaas aan dad lagu qaban,waxaana dib u furmay isku socodka dadka iyo Gaadiidka oo hakad galay.
Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay qaraxyada ka dhaca dalka,waxaana horay loogu dilay qaraxayada mas’uuliyiin askar ka tirsan Ciidamada dowladda iyo dad Shacab ah oo ku sugnaa meelaha ay qaraxyada ka dhacaan.
Previous articleDowlada Federaalka oo xayiraada ka qaadeysa Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo Shuruudo
Next articleDaawo Xildhibaan Dalxa oo ka digay in la musuq maasuqo gurmadka la geynayo Afgooye